सभामुख महरालाई बला-त्कारको आरोप लगाउने महिलाद्धारा प्रहरी चौकी अगाडी आत्म-हत्या प्रयास! – khabartime
Friday December 13, 2019 |
सभामुख महरालाई बला-त्कारको आरोप लगाउने महिलाद्धारा प्रहरी चौकी अगाडी आत्म-हत्या प्रयास!
१५ आश्विन २०७६, बुधबार ०६:४८ 31 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, असोज १४ । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुराचारको आरोप लगाउने संसदकी कर्मचारीले आत्म-हत्याको प्रयास गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । आरोप लगाएकी ति महिलाले करिब डेढ वर्षअघि विष सेवन गरी आत्महत्या प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार बानेश्वर प्रहरी वृत्त अगाडि दिउँसै विष सेवन गरेकी उनलाई तत्काल प्रहरीले उद्धार गरी अस्पताल पु¥याएर २६ दिन अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्काइएको थियो । सोही समयदेखि नै ति महिलाले डिप्रे-शनको औषधि सेवन गर्दै आएको समेत खुल्न आएको छ ।
संसदल सचिवालयमा काजमा कार्यरत आरोप लगाउने ति महिलाले आइतबार राति सभामुख महराले आफ्नो बानेश्वरस्थित डेरामा आएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएपछि अहिले उनले हाम्रा कुरा नामक अनलाइनलाई दिएको भिडियो अन्तरवार्ता भाइरल बनिरहेको छ । अन्तरवार्तामा शाही थरकी ति महिलाले साँझ पख आफ्ना कोठामा आएका महराले आफ्नै घरमा अस्मिता लुटेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले सभामुख महराले आफ्नो रुममा २ गिलास रक्सी खानुभएको जनाएकी छिन् । त्यसपछि रक्सीले मात्तिएर आफ्नो अश्मिता लुटिएको बताइन् । आफ्नो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आफ्नो चरित्र लुटेको उनको आरोप छ । साँझ ढल्दै जाँदा ति महिलाले प्रहरीलाई बोलाउँछु भनेपछि महरा त्यहाँबाट हतारिएर निस्किएको उनले भिडियोमा बताएकी छिन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेसँगै उनको सचिवालयले आपत्ति जनाउँदै त्यसमा सत्यता नरहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख महरालाई सुनियोजित र योजनाबद्द रुपमा फसाउन खोजिएको उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझ्दा महिला कर्मचारीले सभामुखको बारेमा पुरै गलत, कपोकल्पित र अनर्गल समाचार प्रवाह भएकोमा सभामुखसमेत दुखित र आश्चर्यमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘साग’ मा नेपाली खेलाडीको
नेपालको शान बढाएकी गौरिकाले
दृष्टिविहिन चेली काठमाडौँको गल्लीमा
मेडिसिटी काण्डः होल बढी
जनकपुर विमानस्थलमा देखिएका फरक
नेपालको शान बढाएकी गौरिकाले बोकिन् नेपालको झण्डा
मेडिसिटी काण्डः होल बढी ‘चेक अप’ गर्न जाँदा…
जनकपुर विमानस्थलमा देखिएका फरक तीन दृष्य